Leadership ukhaliphe — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Nantsi ubunkokheli MLK yakhe nenkalipho xa umboniso (singasathethi ezinye yokubhala intle endakha ukufunda). Uyala ukwanga imithetho okungekho uyala alinde ngomonde. Uthabatha amanyathelo egameni uhlanga lonke abantu. Njengoko umntu omnyama, Ndinombulelo kakhulu kuThixo ukuze axhase umsebenzi ngaye. Kwaye njengoko ngumKristu, Ndifuna ukulwa okusesikweni kanye njengokuba nzima njengoko Wenzayo, Gcina engqondweni ukuba nguYesu kuphela ukuzisa okusesikweni ngokugqibeleleyo. Kwaye Yena uya.
Le indawana ileta odumileyo MLK ngayo. Kufuneka uyifunde yonke loo nto xa ufumana ithuba.
"Siye besithembele ngaphezu 340 iminyaka amalungelo ethu siseko uThixo awunike. Iintlanga Asia and Afrika ihamba ngesantya jetlike ukuze ubani ukuzimela kwezopolitiko, kodwa nangoku banyebelezela kwindawo ihashe nenqwelo yakowethu isantya ukuze sifumane ikomityi yeti kwikhawuntara sasemini. Mhlawumbi Kulula abo ongazange imijukujelwa ahlabayo yocalulo bathi, "Khawume." Kodwa xa enizibonileyo ekrakra woqhushululu lynch oomama nootata benu ngelo ukuthanda barhaxwe oodade nabazalwana bakho chess; xa uthe wabona yintiyo bayizalisa amapolisa undiqalekisele, kukukhaba bulale abazalwana benu abantsundu kunye noodade; xa ubona uninzi abazalwana benu izigidi ezingamashumi Negro esishiya kwi cage kwisikhongozeli bendlala phakathi kuluntu olumi; xa zibona ulwimi lwakho ezijijekileyo intetho yakho luthintithayo njengoko ufuna ukucacisa ukuba intombi yakho iminyaka emithandathu ubudala kutheni yena akakwazi ukuya epakini yokonwabisa uluntu ukuba usandul zipapashwe kumabonakude, ubone iinyembezi zizehlela emehlweni akhe xa uyaxelelwa ukuba Funtown uvaliwe ukuba Abantwana bayiqaba, ubone namafu owoyikekayo bephantsi ekuqaleni ukubumbeka esibhakabhakeni yakhe encinane sengqondo, yibona ekuqaleni ukuzigqwetha ngobuntu bakhe ngokwenza ubukrakra zingqondweni kubantu abamhlophe; xa kufuneka ipheke Ndimphendule unyana oneminyaka emihlanu ubudala ngubani na lo ucela: "Tata, kutheni abantu abamhlophe kuphethe ukuze abantu bebala kuthetha?"; xa uthatha umnqamlezo drive kwisiphaluka nalifumana kuyimfuneko ukulala ebusuku emva ebusuku ezimbombeni kangako imoto yakho kuba akukho ndlu uzakuvumela ukuba; xa uthotyiwe imihla ngemihla ngemiqondiso ongunogqwashu ngokufunda "emhlophe" 'obugolide "; xa igama lakho kuqala iba "nigger,"Igama lakho phakathi uba 'inkwenkwe" (Nangona zindala wena) igama lakho lokugqibela uba "John,"Nomfazi nonyoko zange banikwe isihloko ohloniphekileyo" uNksk "; xa ngesantya emini luthwaxwa ebusuku ngenxa yokuba wena Negro, eziphilayo zenge wemali tiptoe, akazange eyazi into ukulindela elilandelayo, kwaye ufikelwa uloyiko yangaphakathi kunye nenqala zangaphezulu; xa ngonaphakade balwa ingqiqo ongcakachileyo of "nobodiness" ngokuqinisekileyo uya kuqonda ukuba kutheni bakufumanisa kunzima ukuba alinde. Kukho kufike ixesha xa indebe unyamezelo oxhaphaza, kunye namadoda saba ukulungele ukuba waziphosa enzonzobileni lithemba. Ndiyathemba, Yibani, uyakwazi ukuqonda namonde zethu ezisemthethweni kunye akunakuphepheka. Oyithetha usebenziswano olukhulu ixhala phezu sikulungele ukwaphula imithetho. Oku ngokuqinisekileyo nkxalabo. Ekubeni ke siyakubongoza ngenkuthalo abantu ukuba bathobele isigqibo seNkundla ePhakamileyo ka- 1954 kwakuvumelekile yokwahlulwa kwizikolo zikarhulumente, Xa uqala kuqala kusenokubonakala kunokuba adidayo ukuze kuthi sisezingqondweni ukwaphula imithetho. Omnye no kubuza: "Njani lixhase waphula eminye imithetho kunye nokuthobela abanye?"Impendulo siyifumana yokuba kukho iindidi ezimbini imithetho: lwamalungisa kwanolwabangemalungisa. Bendiya kuba ngabokuqala ukuxhasa ukuthobela imithetho nje. Omnye ngokusemthethweni kodwa uxanduva yokuziphatha ukuthobela imithetho nje kuphela. Ngokuphikisayo, mntu unoxanduva yokuziphatha ukungathobeli imithetho sikweni. Ndiyavumelana nawe St. Augustine ukuba "umthetho ngokungekho akukho mthetho kwaphela."
-Martin Luther King Jr., Ileta evela entolongweni umXhosa
BornWithPurpose • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:33 mna • impendulo
Sean • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:33 mna • impendulo